Adeegyada Cuntada - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Adeegyada CEC ee CEC waxay aaminsan yihiin in cuntada cusub ee la sameeyay ay beddeli karto adduunka. Waxaa naga go'an inaan ku abuurno cunno dhadhan fiican leh oo nafaqo leh nooc ka mid ah barnaamijyada beeraha-ilaa-dugsiga ee dhammaan xarumahayada. Quraacdeena iyo barnaamijkeena qadada waxay siisaa cunno awood u siisa ardaydeena si ay u siyaadiyaan yoolalka waxbarashadooda iyagoo ka dhigaya qof kasta oo soo gala maqaayadayada inay ogaadaan inay ka mid yihiin bulshada iyaga qiimeysa. Qaar ka mid ah kuwa wax iibiya ee maxalliga ah waa Beeraha Shimbirta Cas, Caano Royal Crest iyo Lone Pine Cattle Company of Red Feather. In kabadan 1200 oo arday oo kusugan dhamaan shabakada CEC ayaa lasiin doonaa cunooyin cusub oo la sameeyay sanad dugsiyeedka 2021/22
Kushiinnadayada ganacsi ee CEC waxay ku yaalliin Aurora, Fort Collins, iyo Inverness xarumaha dugsiga sare, kuwaas oo cunto siiya dhammaan Aurora, Castle Rock, Fort Collins, Inverness, Parker, iyo Windsor.
Cuntooyinka ka socda xaruntayada 'CEC Colorado Springs 6-12 campus' waxaa hadda laga bixiyaa Colorado Springs School District 11 macluumaadna waxaa laga heli karaa bogga dugsiga CECCS si wax badan looga barto. Qorsheynta iyo dhismaha furitaanka jiko cusub oo ku taal xerada CEC Colorado Springs 6-12 ee 2022 ayaa socota.
Macluumaad Muhiim u ah Qoysaska
TITAN Iskuulka nafaqada
TITAN waa barnaamij maareynta nafaqada oo ku saleysan webka oo laga isticmaalo dhammaan xarumaha CEC. Fadlan u samee koonto TITAN si aad u hesho codsiyada, cuntooyinka, cuntooyinka, macluumaadka xasaasiyadda, iyo inaad lacag ku shubto koontada ardaygaaga. Liisaska ayaa la heli doonaa Ogosto 4th. Soo degso barnaamijka TITAN si aad u hesho si fudud.
TITAN Ku darista Lacagta Koontada Cuntada
TITAN Xariirka Qoyska
Codsi Qado Bilaash ah & Dhimis ah
Xataa iyada oo la siinayo cunto bilaash ah dhammaan ardayda ilaa Juun 2022, waxaan wali ka codsanaynaa DHAMMAAN Qoysaska inay dhammaystiraan arjiga Qadada Bilaashka ah iyo La-dhimay ee 2021-22 ee TITAN. Degmadeena waa Kulliyadaha Hore ee Colorado (Dhammaan Goobaha, Colorado).
Xiriirinta Qadada Bilaashka ah iyo Qiima dhimista ayaa lagu bixiyay hoos.
Su'aalaha ku saabsan arjigaaga, kala xiriir Ilene Agustin cinwaanka ileneagustin@csi.state.co.us. Waa inaad codsataa sanad walba si aad uhesho waxtarrada.
Macluumaadka CEC FRL 2021-22 Ingiriis
Macluumaadka CEC FRL 2021-22 Isbaanish
Barnaamijka Federaalka ee P-EBT
Barnaamijka faa iidada elektaroonigga ah ee faa iidada faa iidada leh (P-EBT) waa barnaamij federaal ah oo loo sameeyay si loogu bixiyo qoysaska lacago dheeraad ah si ay ugu iibsadaan cuntada markay iskuuladu xirnaayeen ama qaab fog ama qaab isku dhafan oo wax barasho ay sabab u tahay COVID-19. Faa'iidooyinka P-EBT waxaa si elektaroonik ah loogu dhejin doonaa kaarka EBT waxaana loo isticmaali karaa in lagu iibsado cunnooyinka u qalma ee laga helo dukaamada tafaariiqda ee deegaanka iyo internetka. Fadlan ku buuxi arjiga Qadada Bilaashka ah iyo La Dhimay ee TITAN si aad xaq ugu yeelatid.
Websaydhka Colorado P-EBT
Michael Porter Jr. PSA Video loogu talagalay P-EBT
Buugga Recipe Wolf Bistro
Si aad wax badan uga barato noqoshada iibiyaha, ku deeqa jikadaheena, cuntadeena ama su'aalaha guud, fadlan la xiriir:
Agaasimaha Adeegyada Cuntada
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan xariirka TITAN iyo adeegyada la xiriira, fadlan la xiriir:
Maareeyaha Hawlaha Adeegyada Cuntada
Dadka naafada ah ee u baahan habab kale oo isgaadhsiin oo loogu talagalay macluumaadka barnaamijka (tusaale ahaan Braille, far waaweyn, maqal maqal, Muuqaalka Calaamadaha Mareykanka, iwm.), Waa inay la xiriiraan Hay'adda (Gobolka ama deegaanka) halkaasoo ay ka codsadeen waxtarka. Shakhsiyaadka dhegaha la ', maqal xun ama naafo ah waxay la xariiri karaan USDA iyagoo adeegsanaya Adeegga Relay ee Federal at (800) 877-8339. Intaa waxaa sii dheer, macluumaadka barnaamijka waxaa lagu heli karaa luuqado aan ahayn Ingiriis.
Si aad u fayl garaysato cabasho barnaamij takooris ah, buuxi Foomka Cabashada Takoorka Barnaamijka USDA, (AD-3027) laga helay khadka tooska ah ee internetka: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, iyo xafiis kasta oo USDA ah, ama u qor warqad ku socota USDA kuna qor warqadda dhammaan macluumaadka lagu codsaday foomka. Si aad u codsato nuqul ka mid ah foomka cabashada, wac (866) 632-9992. U soo gudbi foomkaaga ama waraaqdaada oo dhammeystiran USDA adoo:
Boostada: Waaxda Beeraha Mareykanka
Fax: (202) 690-7442; ama
USDA - Iyo Caddaaladda Dhammaan